My Note Pro vs Samsung Galaxy Note 4 | Androidsis
Maninona no heveriko fa ny Xiaomi Mi Note Pro dia tsara kokoa noho ny Samsung Galaxy Note 4
Alfonso ny voankazo | | Xiaomi
Ary farany, taorian'ny fiandrasana feno tsaho nanampy tamin'ny afisy dokambarotra mahavariana nataon'ny mpanamboatra sinoa, dia afaka nahita ireo firavaka roa vaovao izahay. Ary izany ve Xiaomi dia nanolotra ny Mi Note sy Mi Note Pro, phablet roa izay hanome be horesahina.
Ny fanontaniana an-tapitrisany dolara dia: ny Mi Note Pro amin'izao fotoana izao no phablet tsara indrindra eny an-tsena sa mbola mihoatra ny Samsung Galaxy Note 4 mahery indrindra? Raha ny hevitro, mifidy ny Xiaomi sy ny Mi Note Pro ny refy ary ireo no antony hinoako izany.
1 Volavola tena manintona
2 Processeur matanjaka tokoa
3 Fahasamihafana eo amin'ny vidiny
Volavola tena manintona
Ity endri-javatra ity no tanjona kely indrindra hatrizay ho an'ny tsiro loko fa satria tiako be ny fitaovana fanamboarana ampiasaina amin'ny faritry Xperia Z an'i Sony, dia nisafidy ny Mi Note Pro vaovao aho. Samsung Galaxy Note 4 dia mampiditra fefy vy, ny akorony ao aoriana dia mbola vita amin'ny polycarbonate. Manahaka tsara ny hoditra izy io, nefa mbola plastika ihany.
Etsy ankilany, nifidy azy ny zanako lahy antsoina hoe vera 3D ho an'ny tontonana aoriana ao amin'ny Mi Note Pro, manolotra sisiny miolaka ary mety tsara kokoa, ary koa fikasihana tena tsara
Misy olana hafa koa tokony ho raisina: ny hateviny. Raha mahatratra 4mm ny naoty 8.5, ny Ny Note 4 ahy dia mirefy 6.95mm fotsiny. Asehoy ny naoty Mi.
Processeur matanjaka tokoa
Na dia marina aza fa ny Samsung Galaxy Note 4 dia biby iray izay mampiditra ny processeur Qualcomm Snapdragon 805, na ny Exynos Octa 7, ny Mi Note Pro dia mitempo noho ilay tovovavy tsara tarehy avy ao Qualcomm, ilay Snapdragon 810, processor izay manana toetra mampiavaka azy.
Tsy lazaina intsony ny RAM. Mbola tsy azoko ny antony tsy nametahan'i Samsung fahatsiarovana 4GB tao amin'ny phabletany voalohany. Etsy ankilany ny Xiaomi Mi Note Pro dia manana RAM 4 GB, fitsangatsanganana manam-pahaizana izay hampiasa ny ankamaroan'ny safidy multitasking an'ny rafitra fiasan'i Google.
Ny antsipiriany iray miavaka dia ny fitehirizana anatiny an'ireo phablets ireo. Raha manana 4GB ny Galaxy Note 32, ny Ny My Note Pro dia mampiakatra avo roa heny ny fahafaha-manao anatiny tonga 64 GB fitehirizana.
Ary farany misy ny faritra SIM. Na dia marina aza fa tsy ny rehetra no manararaotra an'io fampiasa io, ny Samsung Galaxy Note 4 dia manana fanohanana SIM iray, raha toa kosa ny Mi Note Pro fanohanana karatra SIM roa.
Fahasamihafana eo amin'ny vidiny
Ny iray amin'ireo toetra mampiavaka ny vokatra Xiaomi dia ny sandany vola. Matetika ny mpanamboatra monina any Beijing dia manolotra ny fantsony amin'ny vidiny mirary ary ny Mi Note Pro dia tsy ho diso anjara amin'izany. Raha 4 euro ny vidin'ny Samsung Galaxy Note 699, ny Ny My Note Pro dia tonga amin'ny vidiny mora: 450 euro hanovana.
Farany, ny tombony tokana ananan'ny phablet Koreana dia ny Xiaomi Mi Note Pro dia tsy misy any Eropa. Na dia azo ampidirina foana aza izany, raha vonona ny handefa izany any Shina ianao raha manana olana amin'ny terminal.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Maninona no heveriko fa ny Xiaomi Mi Note Pro dia tsara kokoa noho ny Samsung Galaxy Note 4
jhon255 dia hoy izy:
Tpt Rehefa manana rindrambaiko tsara kokoa ny telefaona iray noho ny faritra hitanao dia hanaiky aho.
Valiny amin'ny jhon255
Nahafinaritra ahy ilay lahatsoratra. Hanombohana azy, midera an'i xiaomi ianao amin'ny fametrahana ram 4 gig ... ny hany zavatra mandeha dia ny mamela malalaka ny fisoratana anarana 400 5.7 mandany bateria - zavatra iray hafa izay tsy nolazainao, IPS 3000 santimetatra ary QHD miaraka amin'ny 4mAh ha ha - hatramin'ny tsy misy safidy na endri-javatra amin'ny multitasking / multi-windows toy ny fiasa an-tapitrisany amin'ny naoty XNUMX, maninona no efijery lehibe toy izany?
Milaza ianao fa ny xiaomi dia manana indroa fitehirizana, satria ankoatry ny fisian'ny fanamarihana 4 an'ny 64gb dia azon'ny microsd izy ireo manitatra. Ny xiaomi no. (na dia eo amboninao aza dia ataonao ao anaty sahy)
Ny tsara indrindra rehetra tsy misy fisalasalana dia ny filazanao fa ny tombony tokana amin'ilay note 4 dia ny tsy famarotana ny xiaomi any Eropa, sangisangy izany .. tsy niresaka momba ny bateria, spen, efijery ary ny tsara indrindra ianao rindrambaiko amin'izao fotoana izao mba hahazoana tombony betsaka amin'ny phablet? Matotra .. ny hany zavatra nolazainao fa tsara kokoa momba ny xiaomi dia ny mahia sy ny vidiny. Ny sim indroa tsy mandeha na manatona ahy, hisy olona mila izany. Tsy maintsy hahita ny fakantsary ihany koa isika, manao ahoana ny fandehany?
David alberto dia hoy izy:
Tena mino an'izany ve ianao? Hahahahahahaha tsy tianao ny samsung sy ny towchwiz fa lazao fa tsara kokoa nefa tsy mikasika azy akory. Tsy misy sr ny naoty 4 dia biby tsara tarehy izay mampiseho fiasa izay tsy nofinofin'ny sela hafa akory.
Valiny tamin'i David Alberto
Hahahaha ho an'i Shina risika be tsy misy tohana akaiky ... ary inona no hitranga raha vaky ny vera ... natao ho vokatra miompana amin'ny famokarana ... mmmm be eritreretina araka ny filazany ny vokatra sinoa .. . tianao io !!! hiteny ve izy ireo ???
albert cross dia hoy izy:
Saingy tsy nandoa anao ry zareo mba hitenenana izany, marina?
Valiny tamin'i Alberto Cruz
Fantatrao ve raha manana 4g mifanentana amin'i Eropa ianao?
nogod dia hoy izy:
Ny galaxy note 4 dia tsy nahazo 4gb noho ny zava-misy tsotra fa ny processeur (snapdragon 805) dia tsy 64-bit ary noho izany dia tsy mamindra mihoatra ny 3gb ram. Ny 810 dia efa 64 bits ary raha avelany.
Mampidi-doza tokoa ny misafidy zavatra tsy mbola nokasihinao ary tsy misy fanampiana ara-teknika any Espana koa. Ny andro xiaomi dia manana fanohanana sy fizarana ofisialy, hiakatra ny vidiny.
Mamaly an'i Nogod
Anonimus dia hoy izy:
Izaho dia tavela miaraka amin'ny fihotsahan'ny tany miaraka amin'ny Note 4.
Valiny tamin'i Anonimus
Ny marina dia nampiasa iPhone aho taloha ary ny filan'ny famokarana dia nahatonga ahy hanova ny fanamarihana 4 ary mandraka ankehitriny dia tsy manenina tsotra izao aho noho ny miampy omena azy io, izay fitaovana lehibe iray, tadidio fa ny fitaovana tsara indrindra dia ilay iray Azonao ampiasaina amin'ny zavatra maro ny toy ny antsy miaramila soisa, ankoatry ny rindrambaiko fanaraha-maso lavitra tena tsara izay na ny mini-split aza feheziko, tsy azoko ny fahefana, sns. tiako ny fahombiazana sy ny plus azon'ny zavatra iray hatolotra izaho, izany no antony nanapahako hevitra tamin'ny naoty 4
Nino izany ny tonian-dahatsoratra, tsy dia kendrena mihitsy izy ireo, satria finday vao haingana kokoa dia ara-dalàna ny fisian'izy ireo manana processeur matanjaka kokoa, izay milaza fa misy ny kinova an-tsoratra izay hampiakatra ny 810. Ary koa, ny volavola ho sitrakao satria tiako kokoa ny manana polycarbonate, manatsara ny fihazonana ary afaka miditra amin'ny bateria. Raha ny efijery, mandeha tsy misy filazana fa ny supemoled Samsung dia mihoatra lavitra ny lcd's. Ny teboka tokana hitako tsara noho xiaomi dia amin'ny vidiny.
Mamaly an'i Papsi
juancharlis dia hoy izy:
Raha ny tena izy dia heveriko fa tsara kokoa noho ny nexus 6 na ny iphone 6 plus, ny fiheverana hatrany ny fahasembanan'ny serivisy teknika. Saingy mahatsikaiky ny fampitahana azy amin'ny Note 4.
ny naoty 4 dia mikapoka azy rehetra amin'ny alàlan'ny fihotsahana fotsiny amin'ny efijery (miresaka ny famakafakana ny mpivady fampisehoana aho), ny fahombiazan'ny spen (mahagaga raha manararaotra izany ianao), ary ny bateria. Io no telefaona tokana nananako hatreto ka tsy mbola namerenako azy io intsony tamin'ny alina tamin'ny antsasak'adiny fa manana azy 100 indray aho ary tsy tonga tamin'ny alina latsaky ny 50 isan-jato mihitsy aho.
Ny hany zavatra tsara indrindra ananan'i xiaomi dia ny vidiny, sy ny processeur, fa amin'ny ankapobeny ny Note 4 dia miavaka amin'ny rehetra.
Tsy lazaina intsony ny Knox, sensor sensor, sns. Samsung dia manana zavatra ratsy maro halako fa tsy maintsy ekeko ho vokatra iray manontolo izy io, taona vitsivitsy miala amin'ny Android hafa rehetra, ary indrindra indrindra miaraka amin'ny famitana farany tsara indrindra.
Mamaly an'i juancharlis
Patricio dia hoy izy:
Toa tsy mitombina amiko ny filazanao fa tsy azonao ny tsy nametrahan'ny Samsung ondrilahy 4 gigabyte ram ho an'ny naoty 4 .. satria amin'ny ankapobeny satria tsy ilaina izy ireo fa ny tena lehibe indrindra satria ny SNAPDRAGON 805 dia mahazaka RAM hatramin'ny 3 gigabytes fotsiny. .. tena noob ianao hametraka lahatsoratra amin'ity karazana ity na dia tsy nokasihinao aza ny mi note pro, tsy resahinao ny fanao multitasking an'arivony maro atolotry ny Note 4 ary tsy tsapanao ny asa tsara ataon'ny orinasa koreana tatsimo miaraka amin'ny ny touchwiz sy ny vanim-potoana nohatsarainy, ny fahaleovan-tena mahavariana atolotry ny bateriny miaraka amin'ny efijery famolavolana 2k izay tokony hanome olana ny fizakan-tena nefa ny mifanohitra amin'izay dia tsy mametraka 1 akory .. fehiny, lahatsoratra tsy ilaina amin'ny hevitro.
Mamaly an'i patricio
Manuel Viera dia hoy izy:
Na ny note 4 na ny note pro, blackberry pasport bateria 2 andro, nanana ilay note 3 aho ary malemy ny bateria, ny penina no nampiasako azy in-2 tao anatin'ny 7 volana. amin'ny android tsy misy fisalasalana ny z3
Mamaly an'i manuel viera
Ny datin'ny fanavaozana ny Android 5.0 an'ny laharana HTC iray manontolo dia voasivana
Spiral 2, maodely modular voalohany amidy avy amin'ny Project Ara